Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ukukhuselwa kweCyber ​​elandelayo
Ukukhuselwa kweCyber ​​elandelayo
Uncedo lweMicrosystems itywina intsebenziswano ekunikezeleni ngokhuseleko lwe-cyber kwisizukulwana esilandelayo
Uncedo lweMicrosystems, umboneleli weenkonzo ze-IT kwii-SMEs, ungene kubambiswano lobuchule ne-InsurTech AAAtraq ukunceda abathengi ukunciphisa umngcipheko we-cyber.
Abathengi bethu babhencwa ngakumbi ngoku kwizityholo ngokusilela ekuthobeleni i-ADA kunanini na ngaphambili, ngenxa yoko ukukwazi ukunciphisa umngcipheko yinto elungileyo kumbutho wethu.
-U-CEO weSteven Hart oyi-Advantage Microsystems
Uncedo lweeMicrosystemsUmboneleli ophambili weenkonzo ze-IT kwii-SMEs nakwimibutho engenzi nzuzo, ungene kubambiswano lobuchule nenkampani ye-InsurTech IAAAra ukunceda abathengi ukunciphisa umngcipheko we-cyber.
Ukuxhomekeka koMbutho kwi-intanethi kuyanda unyaka nonyaka, nge-COVID-19 isebenza kuphela ukukhawulezisa lo mkhwa. Uphando olwenziwe yi-ACI kwihlabathi liphela ngentwasahlobo yonyaka ophelileyo lubonise ukuba inani lokuthengiselana kumacandelo amaninzi athengisayo libone ukunyuka kwama-1% ngo-Matshi xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka odlulileyo.
Njengokuba ubhubhane usasaza le meko inyukayo iya kuqhubeka, inyusa umngcipheko kwi-Intanethi kuyo yonke imibutho.
I-inshurensi yobutyala ye-cyber ngokwesiko ikhusela ngokuchasene nemingcipheko efana nokuqhekeza ngolunya kunye kutshanje, ubumfihlo kunye nokukhuselwa kwedatha. Kodwa isiciko se-cyber khange siguquke ukukhusela ukungaphumeleli komxholo-umngcipheko ovelayo oqhutywa kukutshintsha kweepatheni zokusetyenziswa kwe-intanethi-ushiye abaninzi beveziwe.
Abo bakhubazekileyo baxhomekeke kwi-intanethi ukufikelela kwiinkonzo ezingundoqo ebomini babo. Umthetho waseMelika wokuKhubazeka (i-ADA) ukhusela ucalucalulo ngokwesiseko sokukhubazeka, ukhusela amalungelo abantu okufikelela ngokulinganayo kwiinkonzo.
Ukwaneliseka kwidijithali kukonyusa ukungaphumeleli komxholo kwi-Intanethi kunye nemibutho yokuhambelana nayo kwi-ADA. Abanini besiza bajongene nemingcipheko yokwenene evela kumangalelwano kunye nomonakalo wohlobo lophawu oluxabisa imibutho kwi-USA ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ngonyaka.
"Sihlala sijonge ukwandisa uluhlu lwethu lwenkxaso kubaxhasi kunye nokongezwa kwenkonzo yeAAAtraq yinto efanelekileyo ehambelana nayo," utshilo u-Advantage Microsystems CEO, uSteven Hart. "Abathengi bethu bachanabeke ngoku kwizimangalo ngokusilela ekuthobeleni i-ADA kunanini na ngaphambili, ke ngoko ukubanceda banciphise umngcipheko yinto elungileyo kumbutho wethu."
I-AAAtraq yenzelwe abaphathi bobungozi ukuba baqonde, bafezekise kwaye bagcine ukuthotyelwa kwemibutho yabo kwi-ADA. Inkqubo yeqhinga, eqhutywa yimigaqo, eqinisekisa ukuthotyelwa kunokufezekiswa ngokukhawuleza, ngexabiso elincinci kwaye ngaphandle kweziphazamiso zobugcisa.
“Ukhuseleko lwedatha, ukuthintela ukufikelela kwiinkqubo kunye nezinye iingozi ze-cyber zihlala ziyingxaki enkulu eluntwini. Nangona kunjalo, umnini shishini wemihla ngemihla ujongene nemingcipheko eyongezelelweyo engekahlawulwa ngumgaqo-nkqubo oqhelekileyo woxanduva lwe-cyber, utshilo uLawrence Shaw, u-CEO weAAAtraq.
UGallagher, umrhwebi weinshurensi omkhulu ozimeleyo emhlabeni, babenegalelo ekudaleni ubambiswano ngobuchwepheshe babo obuluqilima kwimarike. "UGallagher ujonge rhoqo ekwenzeni izinto ezintsha ngokuzisa izisombululo zokunciphisa umngcipheko kwintengiso," utshilo uSteven Hart.
- IZIPHELO —-
Iintatheli ezijonge ukuzivavanya ngokwazo zinokucela iprofayili yomngcipheko apha - https://aaatraq.com/
Ngolwazi oluthe kratya, nxibelelana noJames Simpson @ TMCC: [imeyile ikhuselwe] / 07771 920893
Malunga neenzuzo zeMicrosystems (https://advantagemicro.net),
Izisombululo zetekhnoloji ye-Smart kubantu bokwenyani. Siyaphumelela kunqamlezo phakathi kwenkonzo kunye netekhnoloji.
Silawula i-IT, ke akukho mfuneko.
Sinceda amashishini amancinci ukuya aphakathi kunye nemibutho engenzi nzuzo isebenzisa itekhnoloji ukutshintsha indlela abasebenza ngayo. Senza lula ulawulo lwazo lwe-IT, ukuvavanya nokulawula ulwazi lwabo kumngcipheko wokhuseleko, sichonge iindlela ezintsha ezivelisa imveliso, lonke elixa sinikezela ngenqanaba lokuphendula kakhulu lenkonzo.
Malunga neAAAtraq (www.AAAtraq.com)
Kuya kuba yinto engenakucingeleka ukuvula isakhiwo esingahambelani ne-ADA. Umgaqo ofanayo usebenza kwi-intanethi. Okwangoku, nangona kunjalo, iipesenti ezingama-94 zewebhusayithi ezingama-225 e-US azithobeli kwaye ziyacalula, ishiya imibutho isemngciphekweni wokumangalelwa.
I-AAAtraq sisisombululo se-InsurTech sabaphathi bomngcipheko wokuchonga kunye nokunciphisa umngcipheko wokuthobela iwebhusayithi ye-ADA. Ukuchongwa kokuThotyelwa kunye neNkonzo yoLawulo, iAAAtraq ibonelela ngesicwangciso-qhinga, indlela eqhutywa yimigaqo yokuthotyelwa ngaphandle kweziphazamiso zobugcisa. Ukuzenzekelayo kwethu okuqhutywa yingqondi kwenza imibutho ukuba iqonde, ifezekise kwaye igcine ukuthotyelwa ngexesha elincinci nangexabiso eliphantsi.
Ukungaqiniseki kuthathelwa indawo kukuzithemba, kuxhaswa yinkxaso yezomthetho kunye ne- $ 50,000 yeendleko zesimangalo.
Iindaba ezibonelelwe ngu
NgoFebruwari 02, 2021, 15:19 GMT
Yabelana eli nqaku
Eyona nto iphambili kwi-EIN Presswire kukukhanya elubala. Asibavumeli abathengi abangabonakaliyo, kwaye abahleli bethu bazama ukuba bakulumkele ukukhupha umxholo wobuxoki nolahlekisayo. Njengomsebenzisi, ukuba ubona into esiyiphosileyo, nceda uyazise. Uncedo lwakho lwamkelekile. I-EIN Presswire, Wonke umntu Iindaba ze-Intanethi Presswire ™, uzama ukucacisa eminye yemida efanelekileyo kwihlabathi lanamhlanje. Nceda ubone eyethu Izikhokelo zoHlelo ufuna ulwazi olungolunye.